Dhoohanayaal! – Kaasho Maanka
Marka hore waan ku salaamay. Waxa aan hadda ku fadhiyaa kursiga aad igu fadhiisisay. Waxaan gacanta ku hayaa qalinka aad ii dhiibtay. Waxa aan xidhanahay suudka aad sababteeda laheyd in aan xidhto. Xafiis seddex mitir ah baan ka soo dhex salaamayaa. Waa xafiiski aad adiga i geysay, lakiin miyaad iga qaadan kartaa? Xaasha. Waa hanti aad i amaahisay, lakiin aad dib iiga dhigtay sida wax aan leeyahay oo kale, ilaa aad i garsiisay in aan aaminay inaanba leeyahay. Ma aqaan halka ay garashadu kaa aadday. Ma aqaan dhoohanaanta halka aad ka keenaty. Ma garan damiirkaan xun halka uu kaaga yimid. Mar walba waxa aan is weydiiyaa damiir xumadaada. Waxa aan shar u arkaa so jeedkaada, waxa aana farxad ii ah hurdadaada. Magac-laawe baan ahaa, lakiin adiga baa magac aan mansabkeeda laheyn i huwiyey. Wa akan adiga ii mashxarada, i buubuuniya iina sacab tuma kolka aan khudbeynayo, ma fiirisid waxa aan ka hadlayo iyo sababta aan u hadlayo, laakiin waad uun isaga keey sacab tuntaa. Baraha bulshada baad iga ammaantaa. Sababta ugu weyn ee ammantaas waa uun labo, midda kowaad waa uun in aan isku qabiil nahay, midda labaad ee suurta galka ahna waa uun in aad iska aamintaa waxqabadka iyo tookha beenta ah ee aan warbaahinta ka jeediyo.
Darteey baad dad u colaadisay. Darteey baad qabiilo iyo ummado u u aflagaadeysay. Marka aan dhaca, boobka, musuqa, caddaalad darrada iyo eexda ku kacaba waad ii cudur-daartaa, oo dadka aan dulmiyey baad sii dulleysataa. Fadhi-ku-dirirka iyo goobaha dadka isugu yimadaan aad baad iiga faanisaa. Been aan boor lagu qarin baad iga shegtaa wax aan anigaba u dhaaran karin baad u dhaarataa, haddane anigu, adiga iyo kuwa kaleba waxba iskuma keey dhaantaan oo wadajir baan idin qiyaamay. Cajiib!
Waxa aad tahay labaatan jir waqtiga kaga lumay ammaanteyda, kor u qaadideyda iyo difaacideydaba, weliba aniga oo had iyo jeer ku howlan boobka hanti aad iiga xaq badantahay. Marmarka qaar baan layaabaa aniga oo konton jir ah sida aan u dulleystay wiil ama gabadh yar oo labaatan jir ah. Wallee libaax baan ahay. Habeenkii marka aan arko adiga oo baraha bulshada ama warbaahinta iga ammaanaya igana difaacaya, dad iga soo horjeedana isirkooda iyo faracooda u gafaya, awliyo aan marnaba laga soo horjeesan karin igu tilmaamaya. Waan qoslaa weliba qosol gariir ah.
Waxaan xasustaa maalintaad ii safneedeen garoonka aan kasoo degayey. Haah, si wanaagsan baan u xasustaa, gabarti yareyd ee xabadka sawirkeyga kaga dhaganaa iyo wiilka koofiyada magacakeyga ku xardhanaa watay. Sidoo kale waxaan xasustaa maalin aan ku baaqayey bannaan baxa sida aad wada jirka ugu ajiibteen, runta baan idin shegayaa xittaa anigu ismaan laheyn sidaa beey ugu soo baxayaan hal khudbo aad jeedisay. Waxa aan iska dhigayey nin u naxayo dalkiisa. Nin idin daneynayo, lakiin waan hubaa xitaa haddaan idin sheegi lahaa in aan khaa’in ahay dad isoo ajiiba oo bannaan baxa sameeyo lama waayeen! Dhoohanayaal.
Waxa aan ku tunto waa adiga shacabka ah. Aad baan kuugu tuntaa. Waan ku dhacaa. Xoolahaaga baan bobaa. Waxba kuuma reebto, haddane waa adiga shacabka ah cidda ii hiilisa. Cidda aan ka helo garabka weyn. Cidda i fahansiisay anigoo miskiin aan waxba kala ogeen ah in aan wax noqon karo, oo aan dad dhan addoonsan karo. Addoon baad ii tahay. Weliba addoon dulman baad ii tahay. Xaqaada baan bobaa haddane adiga baa ii hiiliya. Oo sidee qof aad boobto kuugu hiilin karaa? Xitaa aniga baa isweydiinaya ilaa iyo hadda.
Haddii aan caawa ku dhawaaqo in berrito qorraxda koonfur kasoo baxeyso, qaarkiin baa dhihi doono waa suurta gal. Haah, qaarkiin ayaga oo og in eeysan macquul aheyn beey dhibsan donaan in eey didaan hadalkeyga beenta ah. War tolow badanaa waxa aan dadka u sheegay!
Maxaan dadkaan u qabtay? Horta weligaa ma isweydiisan waxa aad igu tageerto? Kuwa har iyo habeen i garab taagan maxan u sameeyey? Miyeeysan is weydiin aqoonyahanka iyo siyaasiga aan sheegto run ahaan shahooda? Kuwa aan weligood i arkin, waxba aan u qaban, wax aan u qabto iska daaye aan dhawr jeer dhacay baa haddane ammaan i huwiya kol walba. Damiir xumaa kuwaan! Dhaqan ku qaab-daranaa kuwaan. Waa kuwaan shacabka ah. Waa kuwaan wax magaratada ah. Waa kuwaan hadba meeshi la rabo loo wato. Waa kuwa aad adiga kamid tahay. Waa kuwa iska aamina markii aan danteyda dan guud ka dhigo. Waa kuwo aan u yeerto kolka aan rabo, markii kalena iska kala ceyriya. Tolow kuwaani Dhoohanaa!
Muddo dhawr iyo toban sano ah baan “siyaasi” ahaa. In yar oo aan xil hayey mooyee intii kale waxa aan ahaa sharwade. Qaran dumiye iyo qabyaaladiiste. Intaasba waxa aan heystay garab aan dhicin. Anigu weligeey ma bannaan bixin waa uun ku baaqaa. Aniga weligeey baraha bulshada iskuma faanin. Waa uun leeygu faaniyaa. Aniga weligeey isma soo dhaweyn waa uun leey soo dhaweyaa. Siyasiyiinta waan is qabanaa, laakiin durbaba waan heshiinaa, balse dad badan oo i taageera darteey beey siyasigaas kaga go’aan.
Waxa aan heystaa oo ii adeega ‘MA LIIBANAYAAL LAGU LIBAANO!’
Waxa aan kala furfuray waxyaabo badan oo qarankaan muhiim u ahaa. Waxa aan dudumiyey barnaamijyo badan oo waxbadan kuu tari lahaa, lakiin waa adiga shacabka ah cidda iga caawisay burburinteeda. Miyaad maleynesaa in siyaasi aan tageero shacabka ku laheyn wax uun habba yaradanee sameyn karo? Maye nabee. I aamin MAYE baan mar labaad kuugu celinayaa. Habeen walba baan isweydiinaa keenna taageerada leh iyo keenna aan laheyn, midkeen leh qaska baan ku dhiirragallinaa midka aan laheyne inuu Siyaasadda isaga baxo baan kula talinaa. Hadda ogoow idinka oo shacabka ah baad tihiin garab lagu duulo laguna duulo! Waa idinka cidda lagu tunto, xoolahoodana la dhaco, haddane waa idinka cidda eey ka suurto gasho in aan siyaasi sii ahaado. Waxaa laga yabaa in aad la dhacsantahay xaqdarrada aan qolo gaara ku haayo adiga oo mooda in aan kuu daneynayo oo aan adiga ku taaban doonin. Taasi waa qaraw maalmeed.
Waxaa idin madax maray qabiil iyo qabyaalad. Garashadiina waa mid aad u liidato. Waxa aad qaxooti kutihiina inta badan dalalka caalamka. Qaarkiin baa dalka gaajo ugu dhimayo. Carruutiina iyo dhalankiinna waxbarasho ma helaan, kuwa helana waxbarasho liidato beey bartaan. Hoyooyinkiinna jidadka beey ku umulaan. Labaatan jirkiinna darteey buu usoo jeedaan ma harsado mana hooydo. Gabdhihiinna waddooyinka baa lagu kufsadaa. Odayaashiinna waa caadaqaatayaal ii shaqeeya. Kuwa nabad-doon isku sheega ah baa idinkugu horreeya kuwiina aan xisaabta laheyn ee i garab gala. Gunnooyin badan baan afka u dhigtay oo eey hay’ado idinkugu deeqeen. Intaas iyo kabadan baan idinku sameeyey. Inta qof la dulleysto baan idin dulleystay. Waan idin dhagray, welina dhagar aad mustaqbalka dhaw iyo midka shishaba ka qoomameyn dontaan. Haddane weli waa adiga shacabka ah cidda garabka ii ah. Adiga ayaan ku dhagrayaa adiga ayaana keensanayan qalabkii aan kugu dhagri lahaa. Markanaan idinla hadlayo waddaniyad baan jilaa, qiiro isha baarkeed ah baan iska kenaa. Saas baad iigu sacabtuntaa oo aad igu aamintaa.
Miyeey garashadaadu is baddeli dontaa? Adiga shacabka ah baan la hadlayaa. Adiga dhalinyarada ah ee nolosha curdunka u ah. Miyaad ii oggolaan dontaa in aan mar labaad ku duleysto? Damiirku dib ma idinkugu soo noqon donaa? Garaadkiinu qabiil iyo ina hebel ma dhaafi donaa? Qabiilka aan ku awr kacsado ma dareemi doontaan? Dalkaan aan kusoo tagri falay in badan ma iga ceshan dontaa? Kuwa had iyo jeer darteey u xiiqa weliba aniga oo aan ogeyn tolow maka waantoobi donaan? Addoonsiga aan kugu haayo maka bixi dontaa? Waa weydiimo adiga kuu yaal. Waa adiga hadda aqrinayo qoraalkaan. Ii ogolaaw in aan mar labaad ku dulleysto ama iska keey buri oo ii diid. Koleey waa adiga iyo dokhaada.
Maalin dhaweyd buu nin xajka in uu aado rabey waxaa uu arkay diyaarad cagaaran oo geed hoostiis taal. Geedku higlo ayuu ahaa, waxaa ayna diyaaraddu hoostiisa kaga dhuumatay saddex faras oo gadgaduudan, oo geedka duleedkiisa ka cabbayey biyo qabow.Xaajigu fardaha iyo biyaha uma uu jeedin, ee waxaa uu arkay diyaaradda cagaaran oo dhabbacan geedka hoostiisa. Higlo waa geed uu midabkiisu madow iyo...
Soomaaliya soomaalida muslimiinta miyaa gooni u leh?
Soomaaliya yaa leh? Soomaaliya Soomalida Muslimiinta miyaa gooni u leh? Soomaalimada iyo Islaamka yaa horreeyey? 1400 sano kahor xilli Soomaalidu ku tanaadaysay barwaaqada uu ku galladaystay eebaha naxariista badan ee ay ugu yeeri jireen Waaq ayaa ganacsade Carbeed oo deganaa jaziiradda Carabta dhidibada u taagay diin cusub uu isagu ka yahay hogaamiye ruuxeed, kacaa kuf badan kadibna halgankiisii...
Enerjiga iyo Siyaasadda
W/Q: Garaad Magan
Qaybta: Dhaqaalaha, Siyaasadda
Siyaasaddu sideeda bannaan waa dano gaar ah oo loogu adeegaayo shacabka iyo dalka waxaana loo xilsaaray siyaasiyiinta. Siyaasi kasta waxaa khassab ku ah inuu u hogaansamo xeerarka iyo shuruucda dalka u yaal, hadaba maadaama Soomaaliya haysan xeerar qoran waxaa adkaatay in dib loo qoro xeerar cusub kuwaas oo quseeyo Saliidda, Betroolka iyo Gaaska dabiiciga.
Afka dhexe iyo aagga dhexe
Qaybta: Afka Soomaaliga
Baxaalliga ama abuuraha afafka waxaa ka mid ah in luqad kasta oo geyi isku xiran lagaga hadlo ay afguriyadeeda ugu faseexsanaato lahjadda bartamaha dhulkaas lagaga hadlo, sababtuna waa ay caddahay oo dadka dhexda joogaa waxa ay ku xiran yihiin kuwa dhinacyada ka xiga oo dhan, laakiin kuwa darafyada degaa iyaga uun baa iska warhaya. Soomaalida haddii aynu tusaale u soo qaadanno gobollada dhexe...
W/Q: Cabdikariin Shardi 8th January 2020